搜索 KIM 的结果：
KIM：rel inter pron cái gì? [m] ko ai? [f] kā người nữ nào? [nt] kam vật gì? --kāraṇā [ad] với lý do gì --vādī [a] cố chấp ý kiến nào?
kiṃ：[rel．pron．ka 的 n．] 什麼（what），如何，怎樣，無論如何，無論怎樣，何故，為什麼，如何的，怎樣的，什麼樣的．acc．kiṃ； instr．kena 何故，為何．gen．kissa 何故，為何．loc．kismiṃ，kimhi．~ nu，~ nu kho 究竟（到底）為什麼．~ pana，~ aṅga pana，kin ti 那麼（那樣的話）是為（了）什麼．~ aṅga （連〜都〜）更何況（更不用說〜） （cf．kimaṅga）．kiṃ me gharavāsena 我為何有家居（住在家裡）的必要呢．kiṃ āgat'attha 為何你們（這麼）慢慢地（慢吞吞地，大搖大擺地）來呢．kiñca，kiñcāpi [~ ca api] 即使是…（那樣）．
kiṃ：[rel．pron．ka の n．] 何，いかに，いかなる．acc．kiṃ； instr．kena 何故に．gen．kissa 何故に．loc．kismiṃ，kimhi．~ nu，~nu kho 一体どうして．~ pana，~ aṅga pana，kin ti 然らばどうして．~ aṅga いかにいわんや．kiṃ me gharavāsena 私には何で家に住する要があるか．kiṃ āgat'attha どうして君等はやって来たか．kiñca，kiñcāpi [~ ca api] たとえ…であっても．
Kiṁ，【关代、疑代】什么? （【阳】ko = 谁? 【阴】kā = 谁（女性）? 【中】kaṁ = 什么（东西）?）。kiṁkāraṇā，【副】什么理由? kiṁvādī，【形】执什么主义? kiñ canaṁ任何（中．单．主格，形）。kiṁ puna（梵kiṃ punah）﹐何况? kiṁ atthaṁ?（梵kiṃ artham?）何因缘? kiṁ kāraṇaṁ?（梵kiṃ kāraṇaṃ?）何因?
kiṃ，疑问代名词 ka / ki（who？what？which？）n．s．对
kiṃ，疑问代名词 ka / ki（who？what？which？）n．s．主
[+．thoma．ī kiṃ saddā ni abyaya yuea ç vi 7-nitea marhi．kaccinu kiṃ nu nanu kathaṃ kiṃ su kiṃ iccete pucchanatthe．rū，nhā．134．kiṃ su kiṃ iccete vatthupucchanatthe．nīti，sutta，nhā．383．]
[ကဲ+ဣမ်။ ထောမ။ ဤ ကိံ သဒ္ဒါသည် နိပါတ် အဗျယ ဖြစ်၍ လိင်သုံးပါး，ဝိဘတ် ၇-သွယ်၌ ရုပ်ထူးမရှိ။ ကစ္စိနု ကိံ နု နနု ကထံ ကိံ သု ကိံ ဣစ္စေတေ ပုစ္ဆနတ္ထေ။ ရူ၊ နှာ။ ၁၃၄။ ကိံ သု ကိံ ဣစ္စေတေ ဝတ္ထုပုစ္ဆနတ္ထေ။ နီတိ၊ သုတ္တ၊ နှာ။၃၈၃။]
[kiṃ saddāeiea atthuddhāra vimāna，ṭṭha．14-niteaç nīti，pada，nhā．371-nitea．ī kiṃ saddā 3-chaṃso sabbayuea punitea paṭhamāekavi ko-huç itthinitea kā-huç napunitea kiṃç kaṃhu ．，1．2vava-ara na-nitea aṃç sirā kiṃ sā，so vi cvā puṃ nīti，pada，nhā．369-37va-nitea，rū，nhā．1va8-nitea-．vicvā （padamālā） ciç canaç canaṃ- yuea kociç kāciç kiñciç kecanaç kiñcanaṃ-ca ， ]]a a，]]hu mā ra （nīti，pada，nhā．374）．cvā ]]ya]] mha soakhā yo ko-ci yā kāciç yaṃ kiñci-ca 3-ç vi 7- ． ]]sūç vāç arāhu titikyakya maso （aniyamita）ç ussuṃ acuṃ （niravasesaç sakalattha） a]] ho （nīti，pada，nhā．374-5）．]]kiṃ saddā，cika，appavācakā．mhāta，ya-ka，sakalavācakā．lāma，kiṃ mhā，pucchāvācaka e]] （bhu ni）．samudayaç vedanā caso soakhā kiṃ samudayoç kiṃ vedanā-ca sa，sasoakhā ]]kiṃ]]hu pakatia nekaeiea （nīti，sutta．694）． nāmasasoakhā kinnāmo-hu pakatiaç konāmo-hu kāriyaa yuea ra （nīti，sutta．454．nīti，pada，nhā．378）．kiṃkāraṇā nia （nipātasamudāya）hu （nīti，sutta．655）．pucchājotaka kiṃ saddā khāraṃ ta ne ra．puṃcaṃ-esā teitthī kiṃ hoti=īma sa¿ （nīti，pada，nhā．372）．nuç suç nukhoç panacaso ne raeiea．puṃcaṃ-kiṃ nu bhītova tiṭṭhati=a sa¿ （saṃ，1．48，49）．kiṃsuchetvā sukhaṃ seti=ata sācvā rasa¿ （saṃ，1．38）．kiṃ nu kho kāraṇaṃ=a¿ （jā，ṭṭha．1．267）．kiṃ pana tvaṃ udāyi evaṃ vadesi=udāyīaībhisa¿ （ma，2．226）．pucchā-（1） a=kāraṇapucchā．（2） amhukiccatāvatta=kiccapucchā．（3） saara=sarūpapucchā．（4） arāvatthu=vatthupucchā．（5） apruamū=kriyāpucchā 5-rhieiea．kinnu santaramānova，kāsuṃ khaṇati sārathi （jā，2．149）nitea kiṃ saddā a=kāraṇapucchāniteaeiea．kiṃkārapaṭissāvī （dī，1．56）．kiṃ karomi （dī，ṭṭha，1．156）．nitea kiṃ saddā amhukiccatāvatta=kiccapucchāniteaeiea．kiṃsīlaṃ （paṭisaṃ．43）nitea kiṃ saddā saara=sarūpapucchāniteaeiea．kiṃ-dado balado hoti （saṃ，1．26） nitea kiṃ-saddā arāvatthu=vatthupucchānitea eiea．khādasi kiṃ pivasi kiṃ-nitea apruamū=kriyāpucchāniteaeiea （nīti，pada，nhā．371）．kiṃ sabba cvā ttakaç ttika-payuea kittakoç kittakaṃç kittakā-hu taara， （pariccheda）aho （nīti，pada．nhā．377-8）．kiṃ saddā vi araso ]]toç traç thaç vaç hiṃç haṃç hiñcanaṃç hiñciç dāç dācanaṃ]]payuea kutoç kutraç katthaç kutthaç kvaç kuhiṃç kuhaṃç kahaṃç kuhiñcanaṃç kuhiñciç kadāç kudāç kudācanaṃca ．（nīti，sutta，nhā，1va3-7．rū，nhā，12va-6．，4．1vava，1va4，1va6）．kuhiñcanaṃç kuhiñci-nitea kiṃsaddā hiṃpasā ，canaṃç ci- nisāhu （，4．1va4）．nitea eiea．]
[ကိံ သဒ္ဒါ၏ အတ္ထုဒ္ဓါရကို ဝိမာန၊ဋ္ဌ။ ၁၄-၌လည်းကောင်း，နီတိ၊ ပဒ၊ နှာ။ ၃၇၁-၌လည်းကောင်းကြည့်။ ဤ ကိံ သဒ္ဒါသည် လိင် ၃-ပါးနှင့်ဆက်ဆံသော သဗ္ဗနာမ်ပုဒ်ဖြစ်၍ ပုလ္လိင်၌ ပဌမာဧကဝုစ်ဝိဘတ်နှင့် ကော-ဟုလည်းကောင်း，ဣတ္ထိလိင်၌ ကာ-ဟုလည်းကောင်း，နပုလ္လိင်၌ ကိံ，ကံဟုလည်းကောင်း ရုပ်ပြီးသည်။ မောဂ်၊ ၁။ ၂ဝဝ-သုတ်အရ န-၌ အံ，သိနှောင်းရာ ကိံ ရုပ်သာပြီးသည်၊ ကျန်သော ဝိဘတ်များနှင့် လိင်အားလျော်စွာ ရုပ်ပြီးနိုင်ပုံကို နီတိ၊ ပဒ၊ နှာ။ ၃၆၉-၃၇ဝ-၌လည်းကောင်း၊ ရူ၊ နှာ။ ၁ဝ၈-၌လည်းကောင်း-ကြည့်။ ဝိဘတ်အားလျော်စွာ ရုပ်ပြီးပြီး （ပဒမာလာစဉ်ပြီး） ပုဒ်များနောင် စိ，စန，စနံ-ပုဒ်များနှင့် ယှဉ်စပ်၍ ကောစိ，ကာစိ，ကိဉ္စိ，ကေစန，ကိဉ္စနံ-စသည်ဖြင့် ရုပ်ပြီးနိုင်ပြန်သည်၊ ထိုပုဒ်များကို ＂အချို့ အနည်းငယ်၊＂ဟု မြန်မာပြန်ဆို ရသည် （နီတိ၊ ပဒ၊ နှာ။ ၃၇၄）။ လိင်အားလျော်စွာ ＂ယ＂ပုဒ်ကို ရှေးမှ ယှဉ်စပ်တွဲဖက်သောအခါ ယော ကော-စိ ယာ ကာစိ，ယံ ကိဉ္စိ-စသည်ဖြင့် လိင် ၃-ရပ်，ဝိဘတ် ၇-သွယ်ဖြင့် ရုပ်ပြီးနိုင်ပြန်သည်။ ထိုပုဒ်များသည် ＂မည်သူ，မည်ဝါ，မည်သည့်အရာဟု တိတိကျကျ မမှတ်သားနိုင်သော （အနိယမိတ），ကြွင်းမဲ့ဥဿုံ အလုံးစုံ （နိရဝသေသ，သကလတ္ထ） အနက်＂ကို ဟောသည် （နီတိ၊ပဒ၊နှာ။ ၃၇၄-၅）။ ＂ကိံ သဒ္ဒါနောက်၊ စိလျှင်ရောက်က၊ အပ္ပဝါစကာ။ ရှေ့မှာတတန်၊ ယ-ဝင်ပြန်က၊ သကလဝါစကာ။ ဝင်လာမဖက်၊ ကိံ သက်သက်မှာ၊ ပုစ္ဆာဝါစက ဧကန်တည်း＂ （ဘုရားကြီး နိယာမ်）။ သမုဒယ，ဝေဒနာ စသောပုဒ်များနှင့် တွဲစပ်သောအခါ ကိံ သမုဒယော，ကိံ ဝေဒနာ-စသည်ဖြင့် သမာသ်ဖြစ်သည်၊ ယင်းသို့သမာသ်ဖြစ်သောအခါ ＂ကိံ＂ဟု ပကတိပုဒ်အတိုင်း တည်နေသည်ကများ၏ （နီတိ၊ သုတ္တ။ ၆၉၄）။ သို့သော် နာမပုဒ်နှင့်သမာသ်ဖြစ်သောအခါ ကိန္နာမော-ဟု ပကတိပုဒ်အတိုင်းလည်းကောင်း，ကောနာမော-ဟု ကာရိယအဖြစ်သို့ ပြောင်း၍လည်းကောင်း နှစ်မျိုးပြီးသည်ကိုတွေ့ရသည် （နီတိ၊ သုတ္တ။ ၄၅၄။ နီတိ၊ ပဒ၊ နှာ။ ၃၇၈）။ ကိံကာရဏာပုဒ်မျိုးကိုကား နိပါတ်ပုဒ်အပေါင်း （နိပါတသမုဒါယ）ဟု ဆိုနိုင်သည် （နီတိ၊ သုတ္တ။၆၅၅）။ ပုစ္ဆာဇောတက ကိံ သဒ္ဒါသည် တစ်ခါတစ်ရံ တပုဒ်ထည်းတည်း နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ပုံစံ-ဧသာ တေဣတ္ထီ ကိံ ဟောတိ=ဤမိန်းမ သင်နဲ့ ဘယ်သို့တော်သနည်း¿ （နီတိ၊ပဒ၊နှာ။၃၇၂）။ နု，သု，နုခေါ，ပနစသော ပုဒ်များနှင့် တွဲဖက်လျက် တည်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရ၏။ ပုံစံ-ကိံ နု ဘီတောဝ တိဋ္ဌတိ=အဘယ့်ကြောင့် ကြောက်ရွံ့လျက်ရပ်တည်သနည်း¿ （သံ၊၁။၄၈၊၄၉）။ ကိံသုဆေတွာ သုခံ သေတိ=အဘယ်တရားကို ပယ်ရှင်းဖြတ်တောက်လျှင် ချမ်းသာစွာ အိပ်ရသနည်း¿ （သံ၊၁။၃၈）။ ကိံ နု ခေါ ကာရဏံ=အကြောင်းဘယ်သို့နည်း¿ （ဇာ၊ဋ္ဌ။၁။၂၆၇）။ ကိံ ပန တွံ ဥဒါယိ ဧဝံ ဝဒေသိ=ဥဒါယီ သင် အဘယ့်ကြောင့် ဤသို့ဆိုဘိသနည်း¿ （မ၊၂။၂၂၆）။ ပုစ္ဆာသည်လည်း-（၁） အကြောင်းမေး=ကာရဏပုစ္ဆာ။ （၂） အမှုကိစ္စတာဝန်ဝတ္တရားမေး=ကိစ္စပုစ္ဆာ။ （၃） သရုပ်အရကောက်မေး=သရူပပုစ္ဆာ။ （၄） အရာဝတ္ထုမေး=ဝတ္ထုပုစ္ဆာ။ （၅） အပြုအမူမေး=ကြိယာပုစ္ဆာအားဖြင့် ၅-မျိုးရှိ၏။ ထိုတွင်ကိန္နု သန္တရမာနောဝ၊ ကာသုံ ခဏတိ သာရထိ （ဇာ၊၂။၁၄၉）၌ ကိံ သဒ္ဒါသည် အကြောင်းမေး=ကာရဏပုစ္ဆာ၌ဖြစ်၏။ ကိံကာရပဋိဿာဝီ （ဒီ၊၁။၅၆）။ ကိံ ကရောမိ （ဒီ၊ဋ္ဌ၊၁။၁၅၆）။ ၌ ကိံ သဒ္ဒါသည် အမှုကိစ္စတာဝန်ဝတ္တရားမေး=ကိစ္စပုစ္ဆာ၌ဖြစ်၏။ ကိံသီလံ （ပဋိသံ။၄၃）၌ ကိံ သဒ္ဒါသည် သရုပ်အရကောက်မေး=သရူပပုစ္ဆာ၌ဖြစ်၏။ ကိံ-ဒဒေါ ဗလဒေါ ဟောတိ （သံ၊ ၁။ ၂၆） ၌ ကိံ-သဒ္ဒါသည် အရာဝတ္ထုမေး=ဝတ္ထုပုစ္ဆာ၌ ဖြစ်၏။ ခါဒသိ ကိံ ပိဝသိ ကိံ-၌ အပြုအမူမေး=ကြိယာပုစ္ဆာ၌ဖြစ်၏ （နီတိ၊ ပဒ၊နှာ။ ၃၇၁）။ ကိံ သဗ္ဗနာမ် ပုဒ်နောင် လိင်အားလျော်စွာ တ္တက，တ္တိက-ပစ္စည်းများသက်၍ ကိတ္တကော，ကိတ္တကံ，ကိတ္တကာ-ဟု တဒ္ဓိတ်ပုဒ် အဖြစ်ဖြင့်လည်း ရုပ်ပြီးသည်ကို တွေ့ရသည်၊ ထိုပုဒ်များသည် ပိုင်းခြားခြင်း （ပရိစ္ဆေဒ） အနက်ကို ဟောသည် （နီတိ၊ပဒ။နှာ။၃၇၇-၈）။ ကိံ သဒ္ဒါနောင် ဝိဘတ် အမည်ရသော ＂တော，တြ，ထ，ဝ，ဟိံ，ဟံ，ဟိဉ္စနံ，ဟိဉ္စိ，ဒါ，ဒါစနံ＂ပစ္စည်းများသက်၍ ကုတော，ကုတြ，ကတ္ထ，ကုတ္ထ，ကွ，ကုဟိံ，ကုဟံ，ကဟံ，ကုဟိဉ္စနံ，ကုဟိဉ္စိ，ကဒါ，ကုဒါ，ကုဒါစနံစသည်ဖြင့် ရုပ်ပြီးနိုင်ပြန်သည်။ （နီတိ၊ သုတ္တ၊ နှာ၊ ၁ဝ၃-၇။ ရူ၊ နှာ၊ ၁၂ဝ-၆။ မောဂ်၊ ၄။ ၁ဝဝ၊ ၁ဝ၄၊ ၁ဝ၆）။ ကုဟိဉ္စနံ，ကုဟိဉ္စိ-ပုဒ်တို့၌ ကိံသဒ္ဒါနောင် ဟိံပစ္စည်းသာ သက်သည်၊ စနံ，စိ-တို့ကား နောက်ဆက်နိပါက်ပုဒ်များသာဟု （မောဂ်၊ ၄။ ၁ဝ၄）။ သုတ်၌ ဆိုသေး၏။]
kiṃ：[rel．or inter．pron．] what? （m．） ko = who? （f．） kā = which woman? （nt．） kaṃ = what thing? kiṃ kāraṇā ：why? kiṃ su ：[ind．] an interrogative particle．
Kiṁ，[nt．of rel．pron．ka] 1．as nt．subst．what? sotānaṁ kiṁ nivāraṇaṁ what is the obstruction? Sn．1032； kiṁ tava patthanāya what is it about your wish，i．e．what good is your wish? VvA．226； kim idaṁ this is what，that is why，therefore，PvA．11； often with su in dubitative question：kiṁ sū’dha vittaṁ purisassa seṭṭhaṁ what，then，is the best treasure of man in this world? Sn．181； or with nu：kiṁ nu kho what is it then （in series evañ nu kho，na nu kho，kathaṁ nu kho） Nd2 186．-- Gen．kissa of what? Pv．I，91； II，940 （=kīdisassa） and in kissa hetu on the ground of what i．e．why? Sn．1131； Pv．II，81 （=kiṁ nimittaṁ）．-- Instr．kena by what or how is it that：kena ssu nivuto loko Sn．1032．-- Acc．kiṁ：kiṁ kāhasi what will you do? Sn．428； kiṁ āgamma kiṁ ārabbha on what grounds & for what reason? D．I，13，14，etc．； kiṁ nissita to what purpose Sn．1043．-- Loc．，kismiṁ in what or what about：kismiṁ vivādo “what is the quarrel about?” D．I，237； or kimhi，e．g．kimhi sikkhamāno in what instructed? D．II，241 （corresponds to ettha=in this）．The ṁ of kiṁ in Sandhi is either elided or contracted or undergoes the usual Sandhi changes； ki ha=kiṁ ha KhA 78，kissa=kiṁ assa Sn．1032； kīdisa （q．v．）=kiṁ disa； kiñci （see below）=kiṁ cid； kiṁ vaalittle：see kittaka．-- 2．as interr．particle，introducingaquestion=Lat．nonne，Gr．a）/n：kiṁ idāni pi dinne te labheyyuṁ? “Will they receive that which is given now?” PvA．22．So as disjunctive particle in comb．with udāhu （whether-or）：kiṁ-udāhu what （about this） ．．．or is it （otherwise），is it so ．．．or is it not so? （cp．pόteron-h）/，Lat．utrum-an）：kim imasmiṁ attabhāve pitaraṁ pucchasi udāhu atīte? “do you enquire about your father in this existence，or inapast one?” PvA．38； kiṁ nakkhattaṁ kīḷissasi udāhu bhatiṁ karissasi? “Will you takeaholiday or will you work?” VvA．63．-- Very often modified and intensified by other exhortative particles：kiṁ aññatra （with Abl．） unless （by），except for Sn．206 （see aññatra） kin nu kho why，but why，why in the world? D．II，131； J．II，159； DhA II．91．As kimo in kimo nu why then? J．III，373； V，479 （=kim eva）； kimu Sdhp．137； kim pana=nonne：kim pana bhante addasa? “Have you not seen?” D．II，132； kim pana tvaṁ maññasi what then do you think=do you not think then，that? ．．．J．I，171； kim aṅga how much more or less，i．e．far more，or far less Miln．274 as kim aṅga pana why then? M．III，181； Miln．23； Vism．233； kin ti how then? D．II，74； kin ti te sutaṁ have you not heard? D．I，104； kintikaro= kathaṅkaro q．v．； kiñca （cp．kiñcâpi under kiñci）= num-que，nonne； is it not that，rather J．I，135 （expld in c．by garahatte ca anuggahatthe nipāto）．-- kiñci in comb．with yaṁ or yad：whatever； in other combn positive：some，neg．：na kiñci nothing； yad atthi kiñci whatever there is of ．．．Sn．231； n’atthi kiñci there is nothing：see under atthi and kiñcana； kiñci n’atthi loke there is nothing in this world ．．．Sn．1122．‹-› kiñcâpi whatever，however much：kiñcâpi te tattha yatā caranti “however much they endeavour in this” Sn．1080； J．I，147； It．114； KhA 187，190．Same as disjunctive conjunction with foll．pana：（=Lat．quamvis） kiñcâpi hi ． ． ． pana although ．．．yet DhA．I，391； kiñcâpi with pot．．．．atha kho although-yet； it may be that --but S．I，72．-- 3．In composition （°-） often implying doubt，uncertainty （“what is it，that is so & so?”），or expressing strangeness （：doubtful likeness），e．g．kinnaraakind of man （but not sure about it），a half-man； kimpakka odd-looking or doubtful （poisonous） fruit； kimpurisaastrange man （doubtful whether man or beast）； cp．kiṁsuka．
--akkhāyin preaching what? in conn．with kiṁ vādin saying what? i．e．holding what views? A．I，62； --atthaṁ for what purpose J．I，279．--atthiya to what purpose J．IV，239； Miln．19； VvA．230； to any purpose，of any use S．V，171； --abhiñña having what name? J．VI，126．--kara doing whatever （his duty），a servant，in k°-patissāvin an obedient servant D．I，60 （cp．expln at DA．I，168） A．III，37； IV，265 sq．； ThA．252； --karaṇīya business，occupation A．III，113，116，258； V，24，90，338； --kāraṇā （Abl．of kāraṇa） by reason of what，i．e．why? PvA．25； --kusalagavesin striving after that which is good M．I，163=240； --jacca of what caste? Sn．p．80； --nāma of what name? Miln．15，17； DhA．III，397 （both konāma and kiṁnāma）．--pakka strange or unknown （doubtful） fruit，in °rukkhaatree with odd fruit （i．e．poisonous fruit，cp．Rām．II．66，6； Kern，Toev．s．v．takes it to be Strychnos nux vomica） J．I，368．--purisa 1．a wild man of the woods J．IV，254； VI，272，497．-- 2．=kinnara （q．v．） A．I，77； J．V，42，416．f．kimpurisī J．V，215，216．--phala=°pakka，in °rukkhaatree with unknown （poisonous） fruit J．I，271．--rukkha what kind of tree J．V，203．--vādin holding what view? A．I，62； --samācāra （a） of what conduct，in comb．with； --sīla of what character Sn．324 （=SnA 331）．（Page 212）
kiṃ：Why? Pray! What!
（၁） ကြာ။ （၂） အတူ၊ တူသော။
အဘယ်သူ၊ အဘယ်မည်သောအရာ၊ အဘယ်အကြောင်း၊ အဘယ်နည်း။
（၁） မေးမြန်းခြင်း （အဘယ်နည်း）။ （၂） စက်ဆုပ်ခြင်း၊ စက်ဆုပ်ဖွယ်သော။ ကိန္နရ-ကြည့်။ （၃） ကြံခြင်း။ （၄） တားမြစ်ခြင်း။
အဘယ်နည်း။ အသို့နည်း။ အတီနည်း။ အဘယ်အကျိုးရှိသနည်း။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။
ကိံ ဧတံ၊ အဘယ်ကြောင့် ဤအမှုဖြစ်သနည်း။ ကိံ ကရိဿာမိ အရညဝါသေန၊ တော၌ နေခြင်းဖြင့် အဘယ်မူအံ့နည်း။ ကိန္တိ （ကိံ+ဣတိ） အသို့ဟူ၍ကား။ ကိန္တိ ကတွာ၊ အသို့နှလုံးသွင်းခြင်းကို ပြု၍။ ကိန္တေ ဂိဟိဘာဝေန၊ သင့်အား လူ၏အဖြစ်ဖြင့် အဘယ်မူအံ့နည်း။ ကိန္တု （ကိံ+တု） စင်စစ်သော်ကား။ သို့သော်။ ကိံ မညသိ၊ အဘယ်သို့ အောက်မေ့သနည်း။ ကိံ မေ ဃရာဝါသေန၊ ငါ့အား လူ့ဘောင်၌ နေခြင်းဖြင့် အဘယ်အကျိုးရှိအံ့နည်း။ ကိံဝ ဒူရေ၊ အဘယ်မျှလောက် ဝေးသနည်း။ ကိံ ဝဒေသိ၊ အဘယ်သို့ ဆိုသနည်း။ ကိံသု နာမ၊ အ ဘယ်ကြောင့်သာလျှင်။
与 KIM 相似的巴利词：